“Talo walaal diide tagoogaduu kajabaa” | maakhir.com
October 20, 2007 in Maakhir | Tags: Article, Maakhir
Faalo:- Sida inoo wada muuqata, arinta maanta ina hortaala waa arin la filayeey. Taas waxaan ula jeedaa, Maakhir maanta haday laf dhabar yeelatay, oo ay gooni u istaagtay iyadoo garatay danteeda, qaadatay taladeeda, waxay manta diyaar u tahay inay masuuliyadeeda ka soo baxdo, inaynu maanta jaah wareer ka qaadno sida foosha xun ay ula dhaqmeen taageerayaasha Cade Beesha Maakhir wax ina tari mayso.
Run ahaantii waa arin fajac quman laakiinse waxaa ila gudboon, in laynaga baahan yahay dulqaad iyo dadaal, degni iyo diyaar, inagoo talaabo quman ka qaadayna dhibaatada loo geeystay Reer Maakhir, oo weliba si gaar ah loo gumaadayo.
Umalayn maayo inay jiraan dad ka indha tiran maanta siduu maamulka Cade ula dhaqmay Reer Maakhir. Inay maanta madfac la dhacaan walaalahood, xabsiyadana ka buuxshaan, Argagixiso ku tilmaamaan, si ay Xabashi iyo Maraykan Tolnimo uga raadshaan, waa arin laga murugoodo, maantase waa arin mudan in laga digtoonaado. Sababta ka danbaysa xaqdhaafkan waa inoo wada fasirantahay.
Nabadu waa qaali, Walaal nimaduna waa la mid. Labadaba waxaa asaas u ah cadaalad, isxishmayn iyo xaqdhowrid. Hadii la waayosee nabad iyo walaaltinimo ma jirto. Reer Maakhir, waxay ku caan baxeen qadarinta Nabada, Dhowrida Jaarnimada, hase ahaatee dhiigoodu la qiimo weyn, xaqdhowrida sharaftooduna waa muqadas.
Waxaan dhamaan u digayaa oo ku baraarujinayaa dhamaan, shacabka Maakhir, ka Puntland, ka SomaliWeyn, iyo Dunidaba, in la qiimeeyo Xaqqa, la ilaaliyo Cadaalada, la sugo Runta, la ogaado Dulmiga. Dunidu waa Tuulo, ‘Globalization’ baa sababay in maanta waxa ka dhaca Rangoon, Rio laga daawado.
Khaas ahaan Madaxda, Aqoonyahanka iyo Shacabka Maakhir waxaan leeyahay waa in lagu dadaalaa sidii loo difaacilahaa Dadka iyo Dalka. Difaaco waa dhawr qaybood, laakiinse anigu waxaan aad ugu baaqayaa in Warbixinta iyo War-sixida lagu dadaalo, oo aan laga aamusin beenta dunida laga cabsiinayo. Runtu way Cadahay, ee yaan laydiinka dhaadhicin Madoobe waa Cade.
Waxaa Ila Gudboon;
Madaxda Maakhir waa inay War saxaafeedka ku dadaasho, markay warbixintu qumantahay. Isagoo Somali/English/ Arabic ah.
Aqoonyahanka Maakhir waa inuu ku dadaalaa kana qayb qaataa War geeysyada Gobolka, Dalka, Dunida.
Waa in lagu dadaalaa in warka khaladka ah laga hor tago, lala xidhiidho wargeys yada Dunida. (email, phone)
Waa in Shacabka Maakhir ee ku sugan goobaha xiisada kacsan ay ku dadaalaan inay lasoo xidhiidhaan wargeysyada Maakhir, kuwa Wadanka, iyo Dunidaba.
Allaa Weyn-Ninkii Aaminaa Awood Leh
M. A. Gaas II
« Warqad Furan oo ku socota Madaxwaynaa maamul goboleedka Puntland Mudane Cadde Muuse Xirsi
Maamul Goboleedka Maakhir:- War Saxaafeed(Press Release) »